Hlola idolobha laseMexico, eMexico - World Tourism Portal
Hlola idolobha laseMexico, eMexico
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu edolobheni laseMexico, eMexico
Okufanele ukwenze edolobheni laseMexico, eMexico
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeMexico City
Bukela ividiyo ekhuluma ngeMexico City
Hlola idolobha laseMexico inhloko-dolobha ye Mexico, nedolobha elikhulu kunawo wonke eNyakatho Melika elinabantu.
Izifunda zedolobha laseMexico
Indawo yedolobha elikhulu laseMexico City ingenye yedolobha elikhulu kunawo wonke futhi idolobha elikhulu kunawo wonke labantu abahlala eNyakatho Melika, enabantu abalinganiselwa ezigidini ezingama-26 abahlala kule ndawo. Kuklanywe ngokulingana ne-oval ye-60 nge-40km.
Idolobha litholakala i-2,200m ngaphezulu lisho ulwandle. Abanye abantu bangaba nobunzima bokuphefumula ezindaweni eziphakeme kakhulu futhi bahlangabezana nobunzima lapho bephefumula. Lokhu kuphakeme kakhulu kunanoma iyiphi indawo yedolobha elikhulu e-United States. Uma uhlala eduze nezinga lolwandle, ungahlangabezana nobunzima bokuphefumula ngenxa yokuphakama kanye nokungcola. Izinga lomoya, noma kunjalo, selithuthukisiwe eminyakeni embalwa edlule.
Impilo yasebusuku yaseMexico ifana nazo zonke izici zedolobha; inkulu. Kunokukhethwa okukhulu kwezindawo: amaklabhu, imigoqo, izindawo zokudlela, izindawo zokudlela ezinhle kanye nokuhlukahluka kanye nezinhlanganisela zazo ongazikhetha kuzo. Kunokwehluka okumangazayo, kusuka emilonyeni ye-ultramodern eSanta Fe naseReforma, kuya emakamelweni wokudansa asenamakhulu eminyaka eCentro nase Roma. Kukhona futhi ama-pubs eTlalpan naseCoyoacán kanye namaqembu awo wonke umugqa e-Insurgentes, Polanco, Condesa nase Zona Rosa.
Imvelaphi yeMexico City isusela ku-1325, lapho idolobha elikhulu lase-Aztec iTenochtitlan lasungulwa futhi kamuva labhujiswa e-1521 ngumnqobi waseSpain uHernan Cortes. Lo muzi wasebenza njengenhloko-dolobha yeVice-Royalty of New Spain kuze kube sekuqubuka kweMpi Yenkululeko e-1810. Lo muzi waba inhloko-dolobha yoMbuso WaseMexico e1821 naseRiphabhulikhi yaseMexico e1823.
IMexico City inesimo sezulu esiphakeme sasemahlathini aphansi, esivame ukusenkabeni neMexico, sibe nesikhathi esipholile, esomile kusuka ngoNovemba kuya ku-Ephreli kanye nenkathi yemvula kusuka ngoMeyi kuze kube ngu-Okthoba lapho i-95% yezulu yedolobha iba khona.
Njengoba kunabantu abangaphezu kwezigidi ezingama-20 endaweni enkulu yedolobha, ungalindela ukuthola zonke izinhlobo zabantu eMexico City, ngokobuhlanga, ubulili, ezepolitiki, amasiko kanye nokwehlukahlukana kobuzwe. Izakhamizi iningi lawo lingamaMestizo (abantu bezinhlanga ezixubile zaseYurophu nezaseMelika) nabamhlophe. Abantu base-Amerindi bakha ngaphansi kwephesenti elilodwa labantu abahlala kuleli dolobha, kepha kukhona abanye abasathuthukela kuleli dolobha beyofuna amathuba. Njengakwezinye izindawo eLatin America, isimo senhlalo yomnotho sivame ukuhlobana kakhulu nobuzwe eMexico City: ngobukhulu, amakilasi aphezulu nabephakathi anokhokho baseYurophu kunabampofu nabamabanga aphansi.
Idolobha, njengalo lonke izwe, linokusatshalaliswa okungalingani kakhulu kwezomnotho okungabonakala ngokuma komhlaba, kukhulunywa ngokujwayelekile, ngale ndlela elandelayo: amakilasi aphakathi naphezulu ajwayele ukuhlala entshonalanga yedolobha (kugxilwe kakhulu kunxusa laseBenito UJuarez, uMiguel Hidalgo, uCocoacan, uTlalpan, uCuajimalpa no-Alvaro Obregon). Impumalanga yedolobha, ikakhulukazi i-Iztapalapa (iqembu elinabantu abaningi) elinobunzima kakhulu. Lokhu kuyasebenza nakomasipala bomkhandlu omkhulu weMexico City (uCiudad Nezahualcóyotl, Chalco, Chimalhuacán). Yize kunamaphakethi obuphofu yonke indawo (futhi kuvame ukubekwa eceleni kwama-cinciny acwebezelayo we-nouveau riche, njengaseSanta Fe eCuajimalpa), kuyabonakala kalula ukuthi njengoba umuntu ehambela empumalanga izakhiwo ziqala ukubukeka ziningi futhi abantu babukeka beba nsundu ngokwedlulele- ubufakazi befa laseMexico lokungalingani ngokobuhlanga nangokwezenhlalo.
Njengoba kungumuzi omkhulu, yikhaya lemiphakathi emikhulu yakwamanye amazwe, njengamaCuba, amaSpain, amaMelika, amaJaphani, namaChile, neLebanon, kanye ne-Argentina yakamuva neKorea. IMexico City inezindawo eziningi zezindawo ezinendawo yokudlela enezindawo zokudlela nezitolo ezinakekela amaqembu afana namaChinese namaLebanon baseLebanon.
Kuyikhaya lesikhashana ezifundweni eziningi futhi, ngisebenza lapha ezinkampanini eziningi zomhlaba wonke ezisebenza eMexico. Abezinye izizwe cishe banoma yisiphi isizinda sobuzwe bangase bangatholi ukubukeka kwesibili uma begqoka ngokuqinile futhi bezama ukukhuluma iSpanish.
IMexico City ingelinye lamadolobha akhululeka kakhulu eLatin America, futhi yayingumbuso wokuqala esifundeni ukubhalisa ngokusemthethweni umshado wobulili obufanayo (ngoDisemba 2009). Njengoba kunje, lokhu kuvame ukuba yidolobha elinobungqingili, ikakhulukazi esifundeni saseZona Rosa. Ukukhishwa kwesidingo kubuye kube semthethweni, kanye ne-euthanasia kanye nobufebe (lokhu okugcina kuvunyelwe kuphela ezifundeni ezikhethiwe).
Yize iMexico City ibhekwa njengedolobha elibizayo uma kuqhathaniswa namanye amadolobha aseMexico kushibhile kakhulu uma kuqhathaniswa namanye amadolobha amakhulu emhlabeni Paris or Tokyo. Noma kunjalo isabelomali sakho sohambo sizoncika kwindlela yakho yokuphila nendlela ohamba ngayo, njengoba ungathola amanani ashibhile futhi abizayo cishe kuyo yonke into. Izinto zokuhamba zomphakathi ziphakathi kwezishibhile kakhulu emhlabeni futhi ngeke zenze inkinga nganoma yiluphi uhla lwesabelomali ngenkathi kunezindawo eziningi ezingabiza. Ngakolunye uhlangothi ungathola amahhotela asezingeni eliphakeme nezindawo zokudlela ezinhle kakhulu ngamanani aphezulu. Kulabo abasebenzisa imali engaphezulu, ungathola izitolo eziningi ngamadola akho, ama-euro, amakhilogremu, ama-yen… njll.
Ongakuthenga edolobheni laseMexico
Kuzodlani eMexico city
Indawo esejwayelekile yaseMexico yokuhamba ukuyaphuza i-cantina, ibha lapho ukudla kuvame khona kube mahhala, futhi ukhokhela iziphuzo (izinqubomgomo eziqondile kanye nezincane). Ama-Cantinas anikela ngezinhlobonhlobo zeziphuzo zaseMexico nezakwamanye amazwe, amanani entengo ngokuvamile anengqondo uma kuqhathaniswa namanani e-US, futhi uzonikezwa njalo ukudla okuhlukahlukene kwaseMexico, njengama-tacos (kufanele ucele i-'Botana '). Uma ukubekezelela kwakho umculo waseMexico (i-mariachi noma ngenye indlela), amakamelo agcwele intuthu, nomsindo omningi kuphansi, lokhu kungenzeka kungabi yindawo yakho. Ama-Cantinas avulwa sekwephuzile ngokulinganisa, imvamisa adlule phakathi kwamabili okungenani.
Ngaphezu kwalokho, kunemigoqo edlala inhlanganisela yedwala lolimi lwaseSpain nolwesiNgisi, umculo we-elekthronikhi nomculo weLatin / Caribbean. Lawa mabha avame ukuvala i-3-4AM.
Umculo we-Club uwela kakhulu kwizigaba ezintathu eziphambili, umculo we-pop, rock kanye ne-elekthronikhi. Izindawo ze-pop ngokuvamile zidlala okungaphezulu kwamashadi womculo, i-Latin pop, kanye nomculo wesiko waseMexico, futhi kuvame ukwenziwa ngababukeli abancane (ngezinye izikhathi abancane kakhulu), futhi kuvame ukuba yisigaba esiphakeme ngokwengeziwe. Izindawo zamatshe zidlala idwala ngomqondo obanzi, ngesiNgisi nangesiSpanish. Abantu abaningi okungenani bangaphezu kwe-18 kulezi zindawo. Amakilabhu we-electronica, aheha wonke umuntu ovela kubasubathi abakhulu baseMexico City nabathandi be-electronica, yabo yonke iminyaka. Amakilabhu amaningi avalwa sekwedlule isikhathi, i-3-4AM ekuqaleni, kanti amanye avuleke kuze kube yi-7AM noma i-8AM.
Ukubheja okuhle kunakho konke okwake kwaba yiZona Rosa, enenqwaba yemigoqo yasemgwaqweni enama-band band edlala nokukhethwa amaklabhu amaningi, ikakhulukazi amaklabhu we-strip kanye nemigoqo yezitabane. ENingizimu yeZona Rosa ungathola indawo yaseCondesa, enezinketho eziningi zamabha nezindawo zokudlela. Enye indawo enhle yiPolanco, ikakhulukazi umgwaqo obizwa ngeMazaryk, lapho uzothola amakilabhu amaningi amahle kodwa kungcono ukwenza ukubhuka. Amakilabhu asebusuku wePosh namaqembu aphezulu ebusuku angatholakala endaweni yakwaLomas futhi axwayiswe ngokuthi amanye ala maqembu angabiza kakhulu.
Enye into ejwayelekile yaseMexico-isitayela okufanele siyenze lapho siphuma ukuyodansa, imvamisa salsa, meringue, rumba, inkosi, indodana, noma omunye umculo weCaribbean / Latin. Lokhu kujabulisa kakhulu uma ungumdansi onekhono, kepha ngisho nabaqalayo abaphelele abangenandaba nokwenza ubuwula bazobajabulela. Izindawo eziningi zomdanso zivala sekwedlule isikhathi; I-3-4AM ijwayelekile.
Iminyaka yokuphuza esemthethweni yi-18. Akukho emthethweni ukuphuza utshwala esidlangalaleni (“isitsha esivulekile”). Lokhu kusebenza ngokuphelele futhi inhlawulo okungenani amahora angama-24 ejele.
Thatha ikhadi lokuzazisa elifana nekhophi yepasipoti yakho.
Ukubhema ngaphakathi kwezakhiwo zomphakathi nezangasese kwenqatshelwe ngumthetho. Izindawo zokudlela zazivame ukuba nezindawo zokubhema nezingabhemi, kepha imithetho yakamuva ivimbele ukubhema kunoma iyiphi indawo ebiyelwe yomphakathi. Izinhlawulo zingashona, ngakho-ke uma ufuna ukubhema endaweni yokudlela kungcono ukucela isikhonzi ngaphambi kokukhanyisa. Vele, ukuya ngaphandle kuhlale kuyindlela ongayenza. Izidakamizwa ezilula zokubhema, ezifana nensangu, azivunyelwe futhi abephula umthetho bangaboshwa uma kutholakala ukuthi banomuthi ongaphezulu koyedwa.
Queretaro iyidolobha elikhulu lesifundazwe saseQueretaro. Indawo eyi-World Heritage site, iQueretaro ingelinye lamadolobha amadala agcinwe kahle eMexico. Amasonto amaningi amadala nezinye izibonelo zokwakhiwa kwamakoloni zingatholakala lapha, ihora nje lehora le-2 elivela eMexico City noma amahora we-3 avela esiteshini sebhasi se-Terminal del Norte.
I-Oaxtepec kukude kude neMexico City futhi yindawo enhle yokuphuma edolobheni elinenkungu futhi ubhukuda. Isimo sezulu sihlala sifudumele futhi sinelanga futhi kune-waterpark engabizi kakhulu futhi emnandi kakhulu (kuphela ingxenye ivulwa ngezinsuku zamasonto… ngezimpelasonto ipaki lonke livulekile). Kunezindlela eziningi zokulala futhi iningi lifaka ukufinyelela endlini yeklabhu ene-sauna nepuli le-Olimpiki kanye ne-diving echibini.
Cuernavaca iyidolobha elikhulu lesifundazwe saseMorelos. Kusemizuzu eyi-45 kuphela ukusuka eMexico City futhi yaziwa emhlabeni wonke njenge "The City of Eternal Spring" ngenxa yesimo sezulu esihle kakhulu ngesilinganiso sonyaka se-20ºC.
Pueblo yindawo yamagugu omhlaba ye-UNESCO ngokwakhiwa kwayo kwamakoloni nendawo yokulwa namabutho amaFrance maphakathi ne1800's. Idolobha liyaziwa kulo lonke Mexico okwe-cuisine yayo; kuyasiza ukuthatha uhambo losuku olulodwa usuka eMexico City ukuyokwenza ukubona nokubona okunye kokudla. Izindawo zokudlela eziningi ezinhle zitholakala kalula eduze kwesikwele esikhulu.
I-Valle de Bravo idolobha elihle eliseduze kwechibi naphakathi kwehlathi, indawo enhle yazo zonke izinhlobo zemidlalo (isib. ukuhamba ngamabhayisekili, ukuhamba ngomkhumbi, ukushushuluza amanzi kanye ne-paragliding). Cabanga ngokushayela uNevado de Toluca ungene esikhumulweni esinechibi. INevado de Toluca iyintaba-mlilo eshisayo lapho usiya eValle de Bravo. Futhi, ubusika / sekwephuzile sekwephuzile isikhathi esihle kakhulu sokubona imvemvane eyi-monarch uma usiya eVdB.
Deukugcwala kweNgonyama Ipaki Kazwelonke - imizuzu engu-20 kude nedolobha ungazithola uzungezwe izihlahla maphakathi nehlathi. Thatha uhambo olusuka ku-“La Venta” luye ku- “El Convento” noma luye ku- “Cruz Blanca” bese udla ama-quesadillas amakhulu adla isidlo sasemini, awukwazi ukubaphuthelwa ngoba ukuphela kwesakhiwo ku- “Cruz Blanca”. Uma ungathola ibhayisikili lasezintabeni, kungenye yezindawo ezinhle ongahamba ngazo.
Tepoztlan- Idolobha elisha elipholile laseningizimu yeMexico City eline-piramidi ethandekayo ngaphezulu kwentaba. Uhambo olukhuphuka lokubona iphiramidi luthatha cishe ihora futhi likufanelekela uma usubuka ukubonwa ngaphezulu. I-Tepoztlan yaziwa futhi ngomsebenzi wayo owenziwa njalo we-UFO. Kukholwe noma cha uma ufuna, kodwa amaphesenti amaningi ezakhamizi zedolobhana athi abonile i- "ovni."
Bernal imayelana nokuhamba ngehora le-2.5 ngaphandle kweMexico City (enyakatho ibheke eQueretaro), ineLa Peña de Bernal edumile. Idumile ku-soltice ehlobo. Idolobhana elincanyana kepha elinempilo.